Angakanani amanzi okufanele uphuze ehlobo: lokho okucabangayo isazi sokudla okunomsoco uNataliya Samoilenko - Ukufaneleka kanye nempilo 2022
Angakanani amanzi okufanele uphuze ehlobo: lokho okucabangayo isazi sokudla okunomsoco uNataliya Samoilenko
Angakanani amanzi okufanele uwaphuze ehlobo
Yini ongayiphuza ehlobo
Uma kushisa ngaphandle, uyakoma njalo. Futhi angakanani amanzi okudingeka uwaphuze ukuze ulahlekelwe isisindo - ake sikubone.
Kuyavunywa ukuthi umuntu omdala udinga ukuphuza amalitha angu-1.5 amanzi ngosuku ukuze alondoloze ibhalansi yamanzi. Ingabe kunjalo ngempela? Ake sikuthole.
Ukuze siphendule umbuzo wokuthi angakanani amanzi angcono ukuphuza ehlobo ukuze ulahlekelwe isisindo noma ulondoloze isisindo esivele sifinyelelwe, saphendukela komunye wezokudla okuphumelelayo kakhulu ezweni, uNatalia Samoilenko.
Esiswini esingenalutho se-sutra udinga ukuphuza izingilazi ezi-2 zamanzi. Ehlobo, awukwazi ukuphuza ngisho namanzi afudumele, kodwa ekamelweni lokushisa (njengoba lizobe selifudumele). Phuza ingilazi yamanzi isigamu sehora ngaphambi kokudla usuku lonke. Futhi, ihora elilodwa ngemva kokudla, ungakhohlwa ukuphuza ingilazi yamanzi.
Futhi khumbula ukuphuza amanzi phakathi kokudla. Ukuze ungakhohlwa ukuphuza, zibekele isikhumbuzi kufoni yakho noma ube ne-decanter yamanzi eduze nekhompyutha yakho. Phuza amanzi alula noma amanzi kalamula (kodwa kungabikho uju) usuku lonke. Ukuze ubale ukuthi ungakanani amanzi okudingeka uphuze phakathi nosuku, sebenzisa ifomula elula: 30 ml ngekhilogremu engu-1 yesisindo somzimba.
Isiphuzo sasehlobo esinempilo kunazo zonke, yiqiniso, amanzi. Uma ungazizwa uthanda ukuphuza amanzi alula, qaphela izindlela zokupheka zama-lemonade ahlukahlukene (okusekelwe emanzini nasezithelo). Into eyinhloko ukuthi akukho ushukela noma uju ekubunjweni.
Ehlobo, akufanele neze uncike ekhofini, njengoba ikhofi iqeda amanzi emzimbeni (futhi ngesikhathi sokushisa alimnandi noma kunjalo).
Iziphuzo ezinoshukela akufanele zidakwe noma, ngoba ngaphezu kokulimaza isibalo, aziqedi ukoma.
Okubalulekile: uma kushisa ikakhulukazi, phuza amaminerali, amanzi anosawoti kancane. Into ewukuthi ngokujuluka, umuntu ulahlekelwa usawoti omningi. Futhi ngenxa yalokhu, ungase uzizwe kabi (yingakho uvame ukuba nekhanda elibuhlungu ngesikhathi sokushisa). Amanzi amaminerali azosilungisa lesi simo.
Uma uthanda ama-compotes, lesi futhi isiphuzo esihle ehlobo, esizokuvuselela ngokushesha futhi siqede ukoma kwakho. Into kuphela ukuthi, ungafaki ushukela ku-compote lapho upheka (kodwa ungazisoli i-mint!).
Amakhono ayi-7 okufanele uwafunde ngaphambi kokuqala ubudlelwano obusha
Isizungu ngokuvamile sibhekwa njengento embi. Eqinisweni, owesifazane angasisebenzisa ngokugcwele lesi sikhathi. Okungenani kukhona amakhono ayisikhombisa okufanele uwafunde ngaphambi kokungena ebudlelwaneni obusha
Amasudi ehlobo 2021: ukushintsha ama-sundresses nezingubo zakusihlwa
Ukubukeka kwehlobo labesifazane akucabangeki ngaphandle kwezingubo zasehlobo ezikhangayo nezingenakuvinjelwa zabesifazane abathandekayo. Amasudi angenasici ehlobo ayizinhlobonhlobo zezinketho zezithombe zawo wonke ukunambitheka, kuzo zonke izitayela nakuyo yonke iminyaka
U-Anita Lutsenko utshele ukuthi yimiphi imikhiqizo okufanele uyidle ukuze uqede ukuqothuka kwezinwele
Ngenxa yezinwele ezinzima nezinde, usebenzisa izimonyo ezibizayo, kodwa awukho umphumela? Ukungondleki ngendlela efanele kuyimbangela. U-Anita Lutsenko ukhulume ngemikhiqizo yokudla ezokusiza ukuthi umise ukulahlekelwa izinwele ngesikhathi esifushane kakhulu